Ahoana no fomba handrisihana ny fiterahana? Miuropristone amin'ny fanentanana
Matetika, ny vehivavy, indrindra fa ny vao teraka vao voalohany, dia miatrika ny tsy fisian'ny asa amin'ny asa, rehefa efa manakaiky ny fotoana fisehoan'ilay zaza. Vokatr'izany dia ilaina ny hetsika toy ny fanentanana ny asa. Andeha hojerentsika amin'ny antsipiriany bebe kokoa izany, amin'ny fanondroana ny mari-pamantarana, ny fomba sy ny endriky ny fanatanterahana.
Rahoviana ny fanentanana ny asa?
Ny dingana dia atao amin'ny fanapahan-kevitry ny dokotera iray tarihin'ny toetry ny vehivavy sy ny foetus. Amin'ity tranga ity dia misy ny fanentanana ny fanentanana ny fiterahana, rehefa miseho izy dia manomboka avy hatrany. Anisan'izany ireto:
Ny fitondrantena mandritra ny 41 herinandro na mihoatra. Ny mpihaza dia mifikitra amin'ny fitsipika tsy manatsara ny dingana mandra-pahatongan'izany. Saingy ny dokotera sasany dia manandratra ny olana momba ny fahaterahan'ny zaza iray taorian'ny 40 herinandro. Ny tahotra dia vokatry ny fipoiran'ny placenta - ny zaza dia very oksizenina, izay mety hiteraka hypoxia. Rehefa manantena ny kambana ny vehivavy iray dia afaka manapa-kevitra amin'ny fanafarana ny dokotera ary amin'ny herinandro faha-38.
Feno lakolosy matevina. Ny tsy fitoviana amin'ny habeny ny foetus, dia miteraka fahasarotana amin'ny fandroahana ny foetus. Ny fitomboan'ny isan'ny sy ny haben'ny ankizy amin'ny daty aty aoriana dia mihamitombo haingana.
Ny fisian'ny maratra amin'ny uterus. Izy ireo dia miforona vokatry ny fanatanterahana ny asa eo amin'ny taovam-pananahana. Amin'ny toe-javatra sasany, ny fisian'ity zava-misy ity dia endriky ny fizarana sésarean.
Afangaro ny fluid amniotique. Matetika, mandritra ny fitondrana vohoka, dia misy fandikana ny tsy fivakan-tena amin'ny balsama foetus, izay mitarika ho amin'ny fahalalahana mamoaka fluida amniotiaka any ivelany. Io tranga io dia mitaky ny antso amin'ny asa.
Ao anatin'ireo mari-pamantarana hafa ho an'ny fanodikodinana toy izany dia ilaina ny manamarika:
aretim-po sy aretim-po;
Ny fifandonana Rhésus eo amin'ny reny sy ny foetus;
Fanamboarana ny asa any amin'ny hopitaly
Ity dingana ity dia matetika mankany amin'ny toeram-pitsaboana iray, izay ahitana ny reny ho avy dia avy amin'ny 40 herinandro. Amin'io tranga io dia efa resy lahatra ny dokotera fa efa matotra sy vonona ho an'ny fanodikodinana toy izany ny tranon-kibo. Ny fanadihadiana dia mamaritra ny fihenany, ny fahamendrehana, ny fanokafana kely - 2 cm. Ny fihenana ny asa ao amin'ny hopitaly momba ny fiterahana, araka ny voalaza etsy ambany, dia dingana sarotra, voafehin'ny mpitsabo. Azo atao amin'ny fomba fiasa ara-panafody sy tsy pharmacolojika izany.
Ny hevitry ny vondrona teknika voalohany amin'ny fanentanana ny asa dia ny fampiasana fanafody. Ny fototra dia ny hormones izay manandratra ny fahaterahana ny tendrony uterine. Ankoatr'izay, ny tetik'izy ireo dia mikendry ny hampiato ny fizarana ambany sy ny tranonjaza ary ny famokarana oxytocine. Io hormonina io koa dia azo ampiasaina am-bava, mba hampitombo ny fifantohana amin'ny ra. Amin'ny fampiofanana, dia azo ampiasaina ihany koa ny prostaglandins.
Ny fomba tsy fanao ara-panafody amin'ny fanatonana ny vanim-potoan'ny fitaterana, ampiasain'ny dokotera, dia toy izao manaraka izao:
Laminaria - ampiasaina hanalefahana ny tendrony uterine;
amniotomy - otopsy ny bala;
Ny fametrahana ny catheter Foley - ny lakandrano dia manitatra amin'ny alàlan'ny rano iray feno.
Tablets ho fanentanana ny fiterahana
Ny vola toy izany dia ampiasaina manokana amin'ny toeram-pitsaboana, eo ambany fanaraha-mason'ny mpitsabo. Ny mekanika amin'ny hetsika dia mifototra amin'ny fanafoanana ny progesterone, izay mitarika amin'ny fitomboan'ny asa mifototra amin'ny tantaran'ny uterine myometrium. Anisan'ny fanafody an'ity vondrona ity ny:
Mifepristone. Io fanafody io dia ampiasaina ihany koa mba hisakanana ny vohoka amin'ny fotoana fohy. Manakana ny asan'ny progesterone hormonina. Vokatr'izany, aorian'ny fotoana fohy, dia misy fihenam-bidy ny rafitra misy ny tranonjaza.
Miropristone dia matetika ampiasaina mba hampandrosoana ny fiterahana. Ny fanomanana dia mifototra amin'ny zavatra voatanisa etsy ambony. Ny fitsipiky ny fepetra dia mitovy.
Mifegin. Azo atao ny mandefitra amin'ny ampahany sasany, ary tsy misy vokany hafa. Ny hetsika aorian'ny fampiharana dia manomboka, aorian'ny ora vitsivitsy.
Gel ho fanentanana ny fiterahana
Miresaka momba ny fomba hamporisihana ny fiterahana any amin'ny hopitaly, mila anarana sy gel ianao. Ny vehivavy rehetra dia nandre momba izany fitaovana izany. Fomba tsotra izany fomba izany, satria ny famoronana hormona manokana. Ny fitaovana dia ampiasaina raha:
tsy nahomby ny fiterahana;
Misy ny asa marevaka miasa - ritra ny rano, ary tsy misy ny fifindrana;
tsy misy na inona na inona;
tampoka ny ady;
Ny fifangaroan'ny taolam-paty dia fohy, tsy mihozongozona, tsy ara-dalàna.
Ny mpikaroka dia napetraka ao amin'ny vaitra aoriana vaginal. Ny fanodikodinam-bola dia tarihin'ny fitambaran'aretim-behivavy. Raha ny tsimok'aretina dia alefa mivantana ao amin'ny lakandrano mihetsiketsika, dia mety hitranga ny hipopotama. Taorian'ny dingana, mba tsy hivoaka ilay fanafody, dia miandry mandritra ny 30 minitra ilay vehivavy - dia eo amin'ny toerana marindrano, mipetraka eo an-damosiny. Manomboka mihetsika ny zava-mahadomelina aorian'ny 40 minitra.
Fanamboarana ny asa amin'ny fifehezana ny banga
Ny tsy fahampian-tsakafo matevina amin'ny uterine myometrium dia manakana mafy ny fizotry ny fiterahana. Ny fomba tsotra indrindra hanatsarana azy dia ny amniotomy. Izy io dia atao amin'ny toeram-pitsaboana, rehefa tsy misy vokany sy malemy ny fifandonana. Raha heverintsika ny fizotran'ny dingana, dia mamariparitra ny fomba fanentanana ny fiterahana amin'ny fomba toy izany, dia tokony homarihina fa tsy ilaina ny fanomanana aloha.
Ny vehivavy bevohoka dia mety tsy hiahiahy na inona na inona. Amin'ny fanandramana manaraka ny gynolojia, ny dokotera dia mamotika ny fahamarinan'ny bala. Ity dia manaraka ny andalana amina ranoka amniotique. Vokatr'izany fomba izany, mihena ny tsindry ao anatin'ny tranonjaza. Amin'io tranga io, ny dokotera dia manamarika ny fiantraikan'ny latsa-bozaka eo amin'ny taolam-paty. Izany dia manosika ny fanokafana ny tranonjaza, izay mahatonga ny fizotran'ny fahaterahana.
Ny fiterahana ara-boajanahary amin'ny fiterahana
Ity fomba tsotra ity dia tsotra ary azo ampiasaina amin'ny fahaleovantenan'ny vehivavy. Kanefa alohan'ny ahafahanao manentana ny fiterahana amin'ny fomba toy izany, dia mila mijery amin'ny dokotera ianao. Raha ny marina dia tsy voatery ho tsy azo atao ny manombantombana ny daty fiterahana - tsy mifanaraka amin'ny antonony raha mbola tsy matavy ilay matavy. Anisan'ny fomba lehibe indrindra mahatonga izany fanentanana izany ny:
Ny fiantraikany eo amin'ny tendron'ny lohan'ny trondro;
Fanatanjahantena ho an'ny fiterahana
Ny dokotera dia mamaly tsara an'io fomba fitsaboana io, amin'ny fiterahana ara-batana. Ny fanentanana ny zaza teraka amin'io fomba io dia vahaolana tsotra manakaiky ny daty fiterahana. Ny mandeha an-tongotra dia manampy amin'ny fampitomboana ny tonon'ilay myometrium uterine, izay mitarika ho amin'ny fitombon'ny fihenan-tsakafo. Ny mandeha an-tongotra mandritra ny 2-3 ora dia manampy amin'ny fanatrehana aloha.
Ny kofehy misy rindrina dia fomba tsara indrindra hampihenana ny fotoana miandry ho an'ny ankizy. Ho an'ity fampiharana ity, afaka mampiasa seza na seza ianao miaraka amin'ny lamosina avo. Mila fihomehezana, mitazona ny lamosinao. Ataovy tsaratsara kokoa ny fampihetseham-po mihoatra ny 10 isa. Afaka manao fomba 3-4 ianao amin'ny fotoana iray. Tokony ho raisina ao an-tsaina fa ny safidy tahaka ny fampiakarana mavesatra, ny fampiasana hery, dia tsy azo ampiasaina amin'izany. Raha miresaka momba ny fomba hanentanana ny fiterahana amin'ny tenany manokana, ny dokotera dia manamarika fa mba hanamaivanana haingana ny fandehanana dia afaka manadio ny trano, hianika ny gorodona eo amin'ny tohatra.
Ny fihenan'ny tendrontany talohan'ny fiterahana
Ny fomba malaza sy maika indrindra, mitaky ezaka kely indrindra. Ny fanasitranana ny tendron'ny fanentanana ny asa dia omen'ny dokotera saika. Ilaina ny miala amin'ny fisotroana tafahoatra amin'ity faritra ity. Ny movansy dia tokony ho mora, mora. Natao 2-3 heny isan'andro. Ny faharetan'ny tsirairay dia 15 minitra. Ny fikikisana sy ny fikolokoloana ny tendron-tsakafo dia mahatonga ny hormonina oxytocine, izay mahatonga ny fihenan'ny myométrie.
Ny firaisana ara-nofo amin'ny fanentanana ny fiterahana
Raha mieritreritra ny fomba hampandrosoana ny fiterahana any an-trano, fomba fampiasa, ny zavatra voalohany ataon'ny vehivavy bevohoka dia manavao ny firaisana ara-nofo. Ny fisian'ny prostaglandins ao amin'ny ejaculate dia miteraka haingana ny matoatoa. Tokony ho raisina an-tsaina fa ny famporisihan'ny asa toy izany dia ampiasaina raha tsy amin'ny vanim-potoan'ny fivoahan'ny fluid amniotique. Ny paikady dia mifanohitra raha misy fihenana ambany ny placenta, misy fizarana ampahany na aloha loatra.
Inona no mampidi-doza amin'ny fanentanana ny fiterahana?
Raha miresaka momba ny fanasitranana ny fiterahana dia mahatsikaritra ny dokotera fa ny dingana dia tsy misy fahasarotana, raha voafehin'ny dokotera tanteraka ary atao any amin'ny tobim-pitsaboana iray. Anisan'ny voka-dratsy ateraky ny fanodikodinana toy izany ny:
Fanamboarana teraka - "for" sy "manohitra"
Ity fanontaniana ity dia tsy manana valiny mahavariana. Fanamboarana ny fahaterahana, tsara na ratsy izany - ny mpitsabo dia miteny amin'ny fomba hafa. Ny sasany milaza fa ny fihenan'ny artifisialy amin'ny fomba voajanahary dia feno vokatra. Ny hafa, ny mifanohitra amin'izany, dia mihevitra fa ny fanaraha-maso dia voafehy tanteraka, ka mora ny manara-penitra ny asa. Tsara ny manamarika fa voarakitra an-tsoratra izay tsy ahombiazan'ny fanentanana ny asa. Amin'ity toe-javatra ity, manatona seza izy ireo.
Fanamboarana ny asa - vokany
Mety hiteraka voka-dratsy ny dingana noho ny tsy fahampian'ny mpitsabo na noho ny hadisoana. Raha miresaka momba ny fiantraikan'ny fiterahana amin'ny zaza, dia manamarika ny dokotera fa tsy misy fiantraikany amin'ny fahasalamany ny fampiasana fanafody. Ny olana dia mety hiteraka mivantana mandritra ny fiterahana. Voalaza fa:
teraka noho ny fitaterana haingana;
hanoanana oksizenina ao amin'ny foetus.
Izay tsy azonao atao amin'ny fiterahana - fandrarana 10
Famantarana ny placenta
Ny famindrana voajanahary taorian'ny fizarana sesarean
Ahoana no maha-teraka fahatelo?
Ny loko lokon'ny "fararano" - fananganana
Mba hampiasana ny anjara asan'ny Kapiteny Boomerang dia nampiasa ny holatra psychotropic i Guy Courtney!
25 vokatry ny fo torotoro sy ny fomba hiatrehana izany
Chips ao amin'ny mikraoba - sakafo maivana ao anatin'ny 5 minitra
Trondro hazo krismasy amin'ny tanany manokana
Tapakazo mainty - akanjo maoderina ao anaty ati-trano
Herisetra amin'ny volo-javamaniry vascular
Kate Moss sy Johnny Depp - ilay mpivaro-tena be Hollywood indrindra
Fantatry ny rehetra ary tsy niteny izy ireo: ny mpitsabo modely dia nilaza momba ny zava-misy momba ny pédophilie ao amin'ny indostrian'ny lamaody
Frantsay fantsom-bolo - sary maromaro momba ny hevitra tsara indrindra amin'ny manicure maotina
Tolotra tokana: 20 serivisy tsy mahazatra izay manolotra hotely any amin'ny firenena samihafa
Nahoana no nofinofy momba ny fanangonana holatra?
Nahoana no manonofy hena ny nofony?